Koree (Complete Count Committee)
Lakkaawinsa Ummataa kan bara 2010 ilaalchisee gaafiiwwan yeroo baay?ee gaafataman
Home > Minneapolis Census > 2010 > Oromo
Lakkaawinsi Ummata Minneapolis kan bara 2010-nii: Harka keenya keessa Jira
Gara sararaa (website) Magaalaa Minneapolis kan lakkaawinsaa ummataa isa bara 2010-niitti baga nagaan dhuftan.
Imaammanni keenya, lakkaawinsa ummataa kan bara 2010 keessatti lakkaawamuun hagam akka barbaachisaa taye, jiraattota Minneapolis hubachiisuu fi barsiisuu, akkasumattis waayee lakkaawinsaa kanaatis ilaalchisee oduu fi sochiiwwan baayee jiraatan isaan quba-qabaachisuu dha. Fakeenyaaf, yaliiwwan godhaman keessaa tokko koreen ummanni Minneapolis akka guutummatti lakkaawamu hojjattu tan Complete Count Committee jedhamtu ijaaramuu isiiti. Sagantaa bara 2010 ummata lakkaawuu dhaaf baafame hawaasa hubachiisuuf yaalii godhamu karoorsuu fi qindeessuun hojii koree tanaati.
Lakkaawinsa ummataa kan bara 2010-nii sirritti lakkaawuun hegeree magaalaa Minneapolis-f akkaan barbaachisaa dha. Mahaallaqa gara biliyoona $400 tahu kan sagantaalee mootummaa Federaalaa 170-f waggatti ramadame akkaataa addaan qoqqooduu keessatti galmeen lakkoofsa ummataa addeessu jiraatuun akkaan murteessaa dha. Akkasumattis, odeeffanni achirraa argamu kun tajaajiloota hojii hawaasummaatii fi sagantaalee gumaata argatuun irra jiru, kanneen ummataaf barbaachisan dabaluudhaafis lakkoofsi ummataa beekamuun murteessaa dha. Nama osoo hin lakkaawamin hafu 100 irratti, Minneapolis waggaa kudhan keessatti horiin dhabdu gara doolara miliyoona 1-tti tilmaamama. Akkasumattis, Mana-Marii biyyattii keessattis barcumaaleen kutaaleen qabaatan heddummeenna lakkoofsa ummata isaan qaban irratti waan hundeeffamuuf jecha, yoo namni martinuu guututti hin lakkaawamin, Minnesota-n barcumaa isiin dhabuun malutu jira.
Ummata lakkaawuun murtii seeraan kaayame. Odeeffannoon eenyummaa namootaatii fi madhaa-maatii isaanii martinuu yoo diqqaate gara waggaa 72-tiif iccitiin eegamee tura. Odeeffannoo waayee keetii kana, nama biraa dhiisii Prezadantii United State iyyuu galmee san banee laaluu hin danda’u.
Waaee ummata lakkaawuu kanarraa gaafii yoo qabaatte, ykn fedhii keetiin itti hirmaattee tajaajila kennuu yoo barbaadde, e-mail kanaan nu qunnami [email protected].
Akkasumattis, Hannah Garcia [email protected] ykn Jeff Schneider [email protected] qunnamuu ni dandeetta.
Koree ‘Complete Count Committee’
Lakkaawinsa Ummataa kan bara 2010 ilaalchisee gaafiiwwan yeroo baay’ee gaafataman